Sawirro: Ururka Suxufiyiinta Xuquuqda Aadanaha oo Maanta Muqdisho looga dhawaaqay – Kismaayo24 News Agency
by admin 31st December 2017 31st December 2017 091
Munaasabad lagu daah furaayay Ururka Suxufiyiinta Xuquuda Aadanaha ( Journalists For Human Rights) ayaa waxaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho .
Kulanka shaacinta Ururkaan cusub ee u doodaya xuquuqda Suxufiyiinta iyo Xuquuda Dadka kala ee qaba baahiyaha gaarka ah waxaa kasoo qeyb galay Mas’uuliyiin ka socotaty hey’addaha xuduuqda aadanaha, Xildhibaanno, Suxufiyiin iyo marti sharaf kale.
Ugu horeyn kulanka waxaa hadal dheer ka jeediyay Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Xuquuqda Aadanaha Ismaaciil sheykh khaliifa isagoona sharaxaad dheeraad ah ka bixyay Sababaha ururkaan loo aas aasay Cidda aas aastay iyo Ahmiyadda uu saxaafadda soomalia iyo suxufiyiinta u leeyahay .
Guddoomiye Ismaaciil waxaa uu sheegay in Ururkaan ay gundhig u ahaayeen suxufiyiinta soomaaliyeed oo maskax cilmi iyo maalba ku bixiyay In la sameeyo Urur Si gaar ah diiradda u saaraya Arimaha xuquuda aadanaha oo saxafiyiin iyo dadka maatida ahba si isku mid ah xuquudooda loogu doodaayo.
Xubnaha madasha hadalka ka jeediyay waxaa kamid ahaay Sheekh Cabdi Xayi Sheekh Aadan oo ka mid ah Culimada ugu Magaca dheer Soomaaliya waxaana uu ka hadlay muhiimadda xuquuqda aadanaha ay u leedaha guud ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan suxufiyiinta .
Xildhibaan dalxa, Fanaanka farxaan xidig iyo mas’uuliyiin kale ayaa madasha ka hadlay iyagoona bogaadiyay Ururka suxufiyiinta Xuquuqda aadanaha ” Journalists For Human Rights”.
Xog-hayaha Ururka Cabdulqaadir Faarah Dulyar oo khudbad kooban dhinacyo badanna taabaneysay ka jeediyay Munaasabadda ayaa waxa uu balan qaaday in Ururka uu Xoogga saari doono soo tabinta dhacdooyinka ku saleysan xuquuqda aadanaha iyo Tababaridda saxafiyiin howlkar ah oo arimaha xuquuqda aadanaha ka faallooda waxna ka qora dadka xuquuqdooda aas aasiga ah lagu xad gudbay iyadoo loo sameeynaayo barnaamij wareed iyo warbixno lagu soo bandhigaayo tacadiyadda ka dhanka ah xuquuqda aadanaha.
Uruka Suxufiyiinta Xuquuqda Aadanaha waxaa uu noqonaya Ururkii ugu horeeeyay ee noocciisa ah oo laga aas aasay koonfurta iyo bartamaha soomalia waxaana laga filaya in uu waxbadan ka qabto tacadiyada lagula kaco suxufiyiinta madaxa banaan.
DEG DEG: Ra’isul wasaare kheyre oo Raali galin ugu tagay Senator qeybdiid Muxuuse kala soo kulmay?
TOP NEWS: Masuuliyiin uu ku jiro Guddoomiyaha Dagmada Baardheere oo ku dhaawacmay Qarax Xalay lagula eegtay Goob ay….
Tifaftiraha K24 26th August 2016 26th August 2016
Madaxweynaha: “Ciidammada Dowlad goboleedka Galmudug cashar lama ilaabaan ah ayay u dhigeen cadowga”
TOP NEWS: Dhageyso Xasan Shiikh oo Dowlada Kenya Si Cad ugu sheegay in Qaxootiga Soomaaliyeed aysan…
Tifaftiraha K24 25th May 2016 25th May 2016